VaBiti Vanoti reMangwana reUpfumi Harina Kujeka
Vaive gurukota rezvemari VaTendai Biti vanoti homwe yehurumende icharamba ichi dupuka nekuda kwekuoma kwezvinhu
WASHINGTON DC — Vaive gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa, uye vari munyori mukuru weMDC T, VaTendai Biti, vanoti kusavepo kwenjere dzemashandisirwo emari kuchaita kuti upfumi hweZimbabwe hutonyura zvakanyanya mumatope mumwedzi iri kutevera.
VaBiti vanoti izvi zvichakonzerwa nekukwira kwezvikwereti zvemunyika pamwe nekunze kwenyika.
VaBiti vanoti upfumi hwenyika huchakaminama nekushomeka kwemari iri kupinda muhomwe yenyika pamwe nemashandisirwo emari asina hungwaru, izvo zvakaita kuti Zimra itadze kuunganidza mari yayaitarisira muchikamu chechitatu chepagore.
Vanotiwo makambani akawanda akavharwa mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Rimwe dambudziko ravanoti riri kuomesera nyika kusajekeswa kwemafambisirwo emari inobva mumangoda, iyo vakagara vachiti haisi kupinda muhomwe yenyika.
VaBiti vanoti zvivimbiso zvaipiwa nebato riri kutonga reZanu PF munguva yesarudzo zvinosanganisira sekuwedzera vashandi mari dzemihoro nezvimwe, zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti upfumi hwenyika hwuderere zvikuru mumwedzi mishoma iri kutevera.
Vanotiwo hurumende ingangodzora mari yemunyika senzira yekuti ikwanise kuvhara mukaha uri pakati pemari yairi kushandisa nemari iri kupinda muhomwe yayo.